ခု (ခန) - ဝီကီပီးဒီးယား
ဟိရဂန တွင် く သို့မဟုတ် ခတခန တွင် ク (ရောမအက္ခရာဖြင့် ku ဖြင့် မှတ်သားသည်။ ) သည် ဂျပန်ဘာသာစကား၏ ခနတစ်ခုဖြစ်ပြီး တစ်ခုချင်းစီသည် မိုရ တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုကြသည်။ နှစ်ခုစလုံးသည် ခု ku ကိုယ်စားပြု ဖော်ပြကြသည်။ ခန်ဂျိ 久 မှ ဆင်းသက်လာကြသည်။
ဤခနသည် ဒက်တန်ကို ပေါင်းစပ်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဒက်တန်နှင့် ပေါင်းစပ်ပါက ဟိရဂနတွင် ぐ ဖြစ်လာသည်။ ခတခနတွင် グ ဖြစ်လာသည်။ ရောမပုံစံ gu ဟု မှတ်သားကြသည်။ ဒက်တန်ပေါင်းထည့်မှုတွင်လည်း အက္ခရာ၏ အသံထွက်မှုအပေါ်မူတည်ကာ ပြောင်းလဲမှု ရှိသည်။ ပုံမှန်အခြေအနေများတွင် gu ဂု ဟု အသံထွက်သော်လည်း [ŋu ͍ ] တို့၏ [ɣu ͍ ] အလယ်ရှိ စကားလုံးဖြစ်လာပါက ပြောင်းလဲမှု ရှိသည်။ ဟန်ဒန်တန် (゜) ကို ပုံမှန်ဂျပန်စာရေးသားရာတွင် အသုံးပြုမှု မရှိပေ။ သို့သော် နှာခေါင်းသံထွက်ရသည် [ŋu ͍ ]. ကို ဖော်ပြရန်အတွက်မူ ဘာသာဗေဒပညာရှင်တို့က အသုံးပြုကြသည်။
ဟန်ဒက်တန် ( ゜ ) ကို ပုံမှန်ဂျပန်ဘာသာစာများတွင် သုံးလေ့မရှိပေ။ သို့သော် ဘာသာဗေဒပညာရှင်တို့သည် နှာခေါင်းသံပါသည့် [ŋi] ကို ဖော်ပြရန်အတွက် အသုံးပြုကြသည်။
အအိနုဘာသာစကားတွင် ခတခန ク ကို အသေးပုံစံ ㇰ ဖြင့် ရေးသားကြသည်။ နောက်ဆုံး k သံအဖြစ် ဖော်ပြသည်။ in アイヌイタ အအိနု အိတက် (အအိနုဘာသာစကား) ဖြစ်သည်။ အအိနုဘာသာစကားတွင် ဤအက္ခရာသည် တိုးတက်ဖြစ်တည်လာမှုများ ရှိသည်။ သို့သော်လည်း ၎င်းကို စံနှုန်းသတ်မှတ်ထားသည့် ခတခနတွင် မတွေ့ရပေ။
ယူနီကုဒ် အမည် HIRAGANA LETTER KU KATAKANA LETTER KU HALFWIDTH KATAKANA LETTER KU KATAKANA LETTER SMALL KU HIRAGANA LETTER GU KATAKANA LETTER GU
ယူနီကုဒ် 12367 U+304F 12463 U+30AF 65400 U+FF78 12784 U+31F0 12368 U+3050 12464 U+30B0
Numeric character reference &#12367; &#x304F; &#12463; &#x30AF; &#65400; &#xFF78; &#12784; &#x31F0; &#12368; &#x3050; &#12464; &#x30B0;
The Wabun code for く or ク is ・・・－.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ခု_(ခန)&oldid=442881" မှ ရယူရန်
၂၂ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၈ မှ အကိုးအကား မပါဝင်သော ဆောင်းပါးများ
ဤစာမျက်နှာကို ၂၂ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၈၊ ၁၂:၅၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။